ujyaalo khabar - Page4of 20 - नया युगको नया समाचार उज्यालो खबर DAILY NEWS
सरकारले कोरोना उपचारलाई ३१.६ अर्ब ऋण लिदै . . .
कोरोना संक्रमण उपचारका लागि सरकारले थप ३१ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ ऋण लिने भएको छ। यसमध्ये विश्व बैंकले ३ अर्ब ४० करोड ऋण दिइaसकेको छ भने कोभिड १९ खोप व्यवस्थापनका लागि थप ९ अर्ब ऋण सहायता उपलब्ध गराउन हस्ताक्षर भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जानकारी दिए।
यसैगरी एसियाली विकास बैंकले १९ अर्ब २० करोड ऋण दिने भएको मन्त्री त्रिपाठीले बताए।यसअघि नै कोभिड १९ व्यवस्थापनका लागि विभिन्न देशले २ अर्ब बराबरको स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराइसकेका छन्। त्यसैगरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा सरकारले ७ अर्ब ४२ करोड ऋण दिइसकेका छन्।
यसमा जापान सरकारको ५ अर्ब २२ करोड (उपकरणसहित), जर्मन सरकारको ४२ करोड, एसियाली विकास बैंकको ३६ करोड र विश्व बैंकको ४२ करोड छ। अरू देश तथा संघसंस्थाबाट सहयोग प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नागरिक दैनिकबाट
यौ, न सन्तुष्टी कुन उमेरका महिलासँग से, क्स गर्दा बढी मिल्छ ?
संसारमा विचित्रका घट्नाक्रम हरु देख्न सकिन्छ । प्रविधिको प्रयोग गरेर मान्छेले त्यस्ता दृश्यलाई कैद गर्न सफल भएका छन् । प्रत्यक्ष रुपमा नदेखिने र कैद भएका भिडियो हेर्दा अपत्यरिला घट्नाको विषयमा आज हामी तपाईहरुलाई जानकारी दिदै छौ ।
जुन सुन्दै अचम्म लाग्छ । हामीले चर्चा गर्न खोजेको यो भिडियोमा व्यस्त सडको बिचमा एउटा साइकल त्यो पनि बिनामान्छे गुडिरहेको देखिन्छ ।
संसारमा विचित्रका घटना हुन्छन् । जुन हामी प्रत्यक्ष देख्न सकिदैन । तर विश्वभरका विभिन्न विशेष स्थानमा राखिएका सीसीटीभी क्यामेरामा कै द भएका यस्ता भिडियोले तपाईलाई अचम्म बनाउन सक्छ ।
यहाँ त्यस्ता भिडियो प्रस्तुत गरिएको छ जुन तपाईले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न । यि भिडियो हेरेर तपाईलाई अविश्वास पनि लाग्न सक्छ । तर सीसीटीभी क्यामेरामा कै द भएका यि भिडियो विभिन्न मुलुकका हुन् ।
उता बाट रेलगुडिरेहेको र अन्य मान्छे आवत जावत गरीरहेको व्यस्त सडकमा बीना मान्छेको सडक यसरी गुडिरेहेको छ । भिडियोमा हेर्नुहोस् ।
विवाहको गर्ने ठाउँ अनुसार फरक फरक परम्परा हुन्छ जसलाई पुरा गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यस्तै एक परम्परा लोपोन्मुख समुदायमा पनि छ । जहाँ विवाहको पछि केटीेको कुमारित्व जाँच गराउनु पर्छ । त्यहाँ केटीले आफु विवाह अगाडी कुमारी हो भन्ने साबित गर्नुपर्छ । यदि कटी फेल जाँचमा फेल भएमा माइत फिर्ता पठाइदिनेछन् ।
महाराष्ट्रको ठाणे जिल्लमाको कन्जरभेट समुदायको एक परिवारले परम्पराको विरोध गरेपनि उनलाई सामाजिक बहिस्कार गरे । उक्त पुरानो प्रथाको बिरोध गरेकाले उनको हजुरआमाको निधन हुँदा कोही पनि अन्तिम सस्कारमा गएका थिएनन् । उनलाई समाजबाट बहिस्कार गरेपछि प्रहरीकोमा केस पुग्यो । प्र,हरीले समाजीक बहिस्कार गर्ने गराउनेलाई द,ण्ड,निय कार,बाही गर्ने प्रह,रीले जनाएको छ ।
बाबा आमाले छोरी बेच्ने प्रथा भएको शहर
यो यस्तो शहर हो जहाँ युवतीहरुको खुलेआम बिक्रि हुन्छ । यसलाई त्यहाँ प्रथा मानिएको छ । आमा बुबाले आफ्नो छोरीको लागि ग्राहक खोज्न सघाउँछन् । वास्तवमा विवाह गर्नलाई ग्राहक खोजेका हुन् ।
यस्तो आश्चर्य लाग्दो प्रथा युरोपको एक समुदायमा प्रचलित छ र ग्राहक खोज्नको लागि बजार लाग्ने गर्छ । युवतीहरु पनि यस प्रथामा सहमत छन् । उनीहरुले आफ्नो लागि राम्रो पति खोज्ने अवसरको रुपमा लिन्छन् । आर्थोडोक्क्स क्रिस्चियनको एक समुदायको कलायदजीको रोम समुदायको प्रथा हो यो ।
यो समुदायका मानिसहरु धेरै गरीब छन् र मुस्किलले आफ्नो गुजारा चलाएका छन् । स्थिति नाजुक भएकोले समुदायका मानिसहशरुको सोच बदल्न पाएका छैनन् जसको कारण सयौ वर्षदेखि चल्दै आएका परम्परा मानिरहेका छन् ।
सगरमाथा क्षेत्रमा दुई वर्षअघि मृ त्यु भएका अमेरिकीको श व फेला
सगरमाथा क्षेत्रमा दुई वर्षअघि मृत्यु भएका अमेरिकीको श व भेटिएको छ । विसं २०७६ जेठ १३ गते आरोहण सकेर फर्कने क्रममा मृ त्यु भएका क्रिस्टोफर जोन कुलिशको श व शनिबार भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मृत्यु भएका समयमा उनको उद्धारका लागि मौसम अनुकूल नहँुदा सोही स्थानमा छाडिएको थियो । वसन्त याममा आरोहण सकेर फर्कने आरोहीको समूहले उद्धार गरी उक्त शव क्याम्प २ मा ल्याएर राखेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक कवित कटवालले जानकारी दिनुभयो । अहिले त्यहाँबाट हेलिकोप्टरमार्फत उद्धारको प्रयास भइरहेको बताइएको छ ।
राहदानी नं ५०९६५१०६२ भएका ६१ वर्षीय कुलिशको क्याम्प ४ मा हृदयाघातका कारण मृ त्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनी ट्याग नेपाल ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत १४ जनाको समूहमा सगरमाथा आरोहणमा गएका थिए । रासस
विषम् परिस्थितिमा राजनीति गञ्जागोल हुनु विडम्बना : राजेश हमाल
काठमाडौँ — अभिनेता राजेश हमालले कोरोना महामारीको विषम् परिस्थितिमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो सार्वजनिक गर्दै नेपालको राजनीति अगाडि बढ्न पनि नसकेको र यथास्थितिमा सहज रुपले काम गर्न नसकेको उनले बताए ।
‘बेलायतको संसद्‍मा नेपालको गम्भीर परिस्थितिबारे छलफल भएको मैले हेरेको थिएँ । त्यहाँ एकजनाले कोभिडको समयमा नेपालको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको भनेर प्रशंसा पनि गर्नु भएको थियो । तर नेपालको राजनैतिक वास्तविकता के हो भनेर हामी सबैलाई थाहा छ,’ उनले भने,’अहिलेको यो विषम् परिस्थितिमा हाम्रो नेपाली राजनीति गञ्जागोल छ । त्यो भयंकर ठूलो विडम्बना हो ।’
नेपाल सरकारको आफ्नो प्राथमिकता बुझेर त्यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने हमालको भनाई छ । ‘विश्वले यस्तो किसिमको गम्भीरता देखाएको बेलामा यदि हामीले लापर्बाही देखायौं । राजनीतिक किचलो, राजनैतिक मुद्दाहरु सुल्झाउनमा हाम्रो ध्यान छ भन्ने किसिमको सन्देश विश्वमा सम्प्रेषण गर्‍यौं भने विश्वले उठाइरहेको पहल कदममा ह्रास आउन सक्छ,’ उनले भने,’हाम्रो प्राथमिकतामा हामी ध्यान दिऔं । नेपाल अहिले विषम् परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । त्यसबाट नेपाल र नेपालीलाई कसरी पार गराउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा र बुद्धि विवेक खर्चिनु पर्ने हो ।’
यो परिस्थितिमा गम्भीर छौं भन्ने कुरा विश्वलाई सन्देश पुर्‍याउन सके विश्वको ध्यान अझ नेपालतिर तानिने हमालले बताएका छन् । धेरै नेपालीलाई खोप पुर्‍याएर यस विषम् परिस्थितिबाट उम्किन सकिने पनि उनको धारणा छ । ‘कमसेकम एक तिहाई जनतालाई खोप लगाउन सकियो भने सायद यो विषम् परिस्थितिबाट हामी पार लाग्ने छौं । खाली मास्क लगाउनुस्, हात धुनुस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुस् भनेर कतिञ्जेल यो परिस्थितिलाई अगाडि बढारहने । यसको सशक्त समाधान भनेको खोप नै हो,’ उनले भने,’ ‘हामी सबैलाई थाहा छ, जबसम्म कोही सुरक्षित छैन तबसम्म कोभिड हाम्रोबीच रहिनै रहन्छ ।’
यस्ता छन् महिलाका अति संबेदनशील समस्याहरु, जुन भन्दा लाज लाग्ने, नभन्दा समस्या बढ्दै जाने
यो*निबाट पानी बग्नु :
यो*निका केही तन्तुबाट श्रा’व पैदा हुन्छ । सर्भिक्स र यसको ग्रन्थीहरुबाट म्यूकस सेक्रेशनको आपूर्ति भएराखेको हुन्छ । महि’नावारीको बेलामा इन्डोमेटियमबाट सेक्रेशन निस्कन्छ । यौ’नक्रिडाको बखत द्यबचतजयष्लिक ग्रन्थीबाट श्रा’व हुन्छ । सबै महिलाहरुमा यो”नीमार्गलाई चिल्लो पार्न केही श्रा,व भइराखेकै हुन्छ । बढी श्रा,व भयो भन्दैमा केही चिन्ता गर्नुपर्दैन ।
यो”नि चिलाउने :
यो महिलाहरुमा हुने सामान्य समस्या हो । भन्नपनि लाज लाग्ने, नभन्दा समस्या विकराल बन्दै जाने । यो समस्यामा सेतो पानी बग्ने तथा यो’निका भित्ताहरुमा चि’लाउने हुन्छ । चूर्णा परे पनि गु’ह्द्धारबाट सर्दैसर्दै वर आइपुग्छन् र यो,नि चिलाउने हुन्छ । हर्षा भएमा, न्यूरोसिस र महि’नावारी हुनुभन्दा पहिले पनि यौ*नी चिला’उने गर्छ ।
गर्भ/वती अवस्था यस्तो समस्याले बढी नै सताउछ, राती गुम्सिएपछि त कन्याउँदा घा’उ पनि हुन्छ । पिसाब मात्र जाँच गरेमा पनि धेरै कुरा पत्ता लाग्छ । यदि कारण पत्ता लागेन भने चिलाउन रोक्ने उपाय अपनाउनु पर्छ । चिलाउन रोक्ने, निद्रा नपरेमा निद्राको औषधि दिन सकिन्छ । रोग निको पार्ने पहिलो कडी सरसफाई अपनाउनु हो । भल्भमा क्या’न्सर भएर चिला’उँने समस्या देखिएको हो, भने यसलाई त शल्य,क्रियाबाटै उपचार गर्नुपर्छ ।
रक्त श्रा’व धेरै हुनु :
धेरै दिनसम्म रक्तश्रा’व भइराखे रक्त,ल्पता हुनसक्छ । यो रोग होइन तर रो’गको लक्षण हो । सामान्य कारणमा पेल्भिक क्षेत्रका दि’र्घरोगहरु हुन सक्छन् । अर्को कारणमा, शरीरमा इष्ट्रोजेन हर्मोन बढी निस्कनु पनि हो । धेरै दिनसम्म महि’नावारी रोकिएर रक्त’श्राव भएमा पनि धेरै रगत हुन्छ ।
यो क्या*न्सरको सुरुको लक्षण पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन । कुनै पनि महिलाको प्रजनन् वा ःभलयउबगकभ को अवस्थापछि पनि रक्त’श्राव भएमा क्या,न्सर हुन लागेको छ कि भनेर चेक गर्नुपर्दछ । यदि सर्भिक्स भ्चयकष्यल देखिएमा पाठेघरको क्यू’रेट गरेर जाँच्नु पर्छ । अनियमित रक्त’श्राव हुने कारणमा पोलिपको कारणले, गर्भ,पतन पूर्ण नभएमा, एष्ट्रोजन हार्मोन खाादा खाँदै बन्द गरेमा हुन्छ । रक्तश्रा,वलाई पूरा जाँच गरेर कारण पत्ता नलगाई त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन ।
प्रत्येक महिलाले प्रत्येक महिनामा निश्चित समयको अन्तरमा एक किसिमको रक्तश्रा,व यो,निबाट बाहिर निस्कन्छ र यसले ग’र्भ रहनसक्ने कुराको सङ्केत दिन्छ । यसलाई नै महि,नावारी भन्दछन् । यो सामान्यतयाः गर्मी प्रदेशमा १२–१३ बर्षमा र शीतोष्ण प्रदेशमा १५–१६ बर्षमा सुरु हुन्छ । र ४५–५० बर्षको उमेरसम्म रहन्छ । कुनै बालिकाको ११ बर्षभन्दा पहिला महि,नावारी भएमा र १७ बर्षसम्म पनि नभएमा स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग जचाउँनुपर्छ ।
यो रक्तश्रा,व हुने प्रक्रिया ३ देखि ५ दिनसम्म हुन्छ । महि,नावारी सुरु हुनु किशोरी अवस्था समाप्तिको सङ्केत हो । यसको अर्थ बिहे गरी दिनुपर्छ भन्ने होइन । धेरै रक्तश्रा,व र कम रक्तश्रा,व दुबै खतराका सङ्केत हुन । रज,स्वला हुँदा करिब ५० मि.लि. रगत बग्छ । एक रजस्वला भएदेखि अर्को रजस्वला हुने अवधिलाई रजस्व’ला चक्र भनिन्छ । धेरैजसो महिलाहरुको चक्र २१ दिन र २८ दिन हुन्छ ।
रजस्वलापछि अण्डाबाट इप्ट्रोजन निस्कन्छ, करिब १३–१४ दिनपछि एउटा अण्डा वा फुल निस्कन्छ । यसले ग’र्भाशयमा बच्चाराख्ने शक्ति बृद्धि गर्छ तर ग’र्भ नरहेमा सानो हुँदै बिलाएर जान्छ । साथसाथै हर्मोनको उत्पादन घट्दै जान्छ र रगतका नली फुटी रगत बग्छ । गर्भ नरहेमा रजस्व’ला हुन्छ ।
– डा. विष्णुप्रसाद पण्डितको ‘तत्काल डाक्टर नभएमा’ पुस्तकबाट साभार
के हो नागरिकतासम्बन्धी विवाद ? के छ अध्यादेशमा ? थाहा पाउनुहोस् !